Apple Kuona Kudonha Kuonekwa Kunoponesa Mutyairi Wehupenyu | Ndinobva mac
Apple Kuona kuwira kwekutsvaga kunoponesa hupenyu hwemunhu anofamba bhasikoro
Pasina mazuva mazhinji apfuura isu takagovana newe nyaya ye Apple Watch mushandisi kuti nekuda kweiyo wachi akaona akajairika moyo mutinhimira uye aigona kurapwa muchipatara. Nhasi tinoda kugovana newe imwe yeaya maApple Watch nyaya mairi tinogona kusimbisa kuti yakaponesa hupenyu hwake kune wako mushandisi.
Tsaona yaWilliam Bout chinhu chinogona kuitika kunaani zvake uye icho ndechekuti akarohwa nemotokari iyo mushure mechiitiko ichi Haana kumira kuti amubatsire akabva atiza. Mutyairi webhasikoro akasiyiwa asina chaanoziva pasi uye Apple Watch yake ndiyo yaive nebasa rekuzivisa nezveve emergency kuti vabatsirwe.
Yekudonha detector yakashanda zvakakwana
Uye ndezvekuti nekuda kweiyi Bout sensor, iye akagamuchira kutariswa kweanokurumidzira masevhisi pasina iye kuti aite chero chekubata pane wachi kana chero chinhu, paakaona kudonha, akadaidzira emergency emergency otomatiki avo vakakwanisa kumurapa uye kumuendesa kuchipatara uko kwaari kupora kubva kumaronda ake. Apple Watch Series 4 zvichienda mberi zvine basa iri, mamwe ese apfuura mamodheru haadaro.
Kana iwe ukaratidza zera rako kusvika gadzira iyo Apple Watch kana mune Hutano app ye iPhone yako uye une makore makumi matanhatu nemashanu kana kupfuura, iri basa rinoitwa otomatiki asi kune mamwe ese rinofanirwa kumisikidzwa nemaoko kana tichida. Tarisa kuti zera rako chairo rinowanikwa mune rako rezvechiremba uye mune rako rehutano hutano kuti ugone kumisikidza uye rangarira kuti kana iwe uchidzidzira chiitiko chemuviri iyo sensor inogona kuona kuwira isina kunyatsoita. Chero zvazvingaitika ibasa rinonakidza kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Kuona kuwira kwekutsvaga kunoponesa hupenyu hwemunhu anofamba bhasikoro
Apple inonyora nyowani Mac modhi neEurasian Commission